Ndị nkuzi | eactivo | Spanish maka kwabatara
Tọrọ ntọala na Palma site abụọ nkụzi nke Spanish dị ka a asụsụ mba ọzọ, Nọ n'ọrụ a mụrụ na Spanish 2008, a na-abụghị uru nzukọ na ihe mgbaru ọsọ nke Ọrụ mwekota nke kwabata obodo anyị site ozizi nke Spanish. Mgbe afọ atọ gasịrị, Nọ n'ọrụ Spanish na-aghọ a free Portal maka ịkụziri Spanish maka otu nzube: enyemaka mwekota site asụsụ ozizi. Iji mee nke a, ị ga-: omume kere anyị, References ndị ọzọ peeji nke metụtara ozizi nke Spanish, online ego gị na-amụ na gị onwe gị na njikọ weebụsaịtị na ihe ọmụma bara uru nke pụrụ inyere gị n'ụbọchị ruo n'ụbọchị.
M kpebiri na m na-aga n'ime ọrụ a na 1998 mgbe emecha ọ na Spanish nkụzi maka mba ọzọ International House Madrid. N'otu afọ ahụ m kwagara San Francisco na ọ bụ n'ebe ahụ m malitere njem m, bụ nnọọ ahụmahụ na mụtara a otutu.
Ebe ọ bụ na 1998 dị m nwere ohere ahụ kụziere Spanish ke Spain na ná mba ndị ọzọ. N'ihi nke a ka m ji bịa na kọntaktị na omenala dị iche iche na ụzọ nke mmụta na m ga-na-anụ ụtọ ọrụ a.
Na 2005 m mudé a Mallorca, M malitere ịrụ ọrụ n'ebe ahụ na votes Palma na zutere Begoña. Anyị rụrụ ọrụ ọnụ afọ atọ na, n'ịbụ ndị ọchịchọ inyocha ọhụrụ ọrụ horizons, na 2008 anyị kpebiri ịmepụta otu NGO, Nọ n'ọrụ Spanish, iji nyere aka mwekota nke si mba ọzọ site na ozizi nke Spanish.
A afọ mgbe e mesịrị, akara aka m na-Hanoi (Vietnam) n'ihi ya anyị aghaghị-echegharị echiche anyị echiche nke ịmụta NGO Internet, pụtara na ọ ga-eme ka anyị nwee ike ịna-arụ ọrụ n’ebe dị anya. N'ihi nke a bụ website nke Spanish akụ. Atụrụ m anya na-ahụ ya n'ezie na-enye aka na ihe mgbaru ọsọ anyị dị ka òtù na-zutere.
Site 2011 M wee na-ejegharị ejegharị, ndụ na-ezi ihe ná mba dị iche iche. N'ime afọ anọgidewo m na-ezi ihe ma na-arụ ọrụ na a website, ma m na-amụkwu banyere otú e si wuo weebụsaịtị na esi etinye herremientas na weebụ awade anyị aka ịkụzi ihe na ịmụ nke ụmụ akwụkwọ m.
Ebe ị nwere abụọ njikọ m weebụsaịtị nkeonwe, na otu onye bụ site M Blog banyere mba ebe m biri na nke ọzọ si na ebe nrụọrụ weebụ m ozizi na skype. M m nnọọ obi ụtọ banyere nke a ọhụrụ oru ngo ma na E-arụsi ọrụ ike dị ka anyị dị ezigbo mma azịza, Daalụ niile!
Na 1999 M mere a ọzụzụ N'ezie maka ndị nkuzi nke Spanish dị ka a asụsụ mba ọzọ na International House Barcelona. M hụrụ n'anya ọ na m maara site ụbọchị otu na m chọrọ izi Spanish. Na 2000 M kwagara San Francisco na kụziiri n'ebe fọrọ nke nta ka afọ abụọ.
Na 2002 M wee Spain na m malitere ịrụ ọrụ na International House Palma na-akụziri Spanish. Mgbe m zutere Delia na Palma 2005 jikọọ ngwa ngwa na hụrụ na, E wezụga ịga ahụmahụ, Ebe bi ná mba ọzọ na ọtụtụ mba na ọbụna rụsịrị ọrụ n'otu ụlọ akwụkwọ dị na San Francisco, ọ bụ ezie na dị iche iche oge, nwere a yiri nnọọ ọhụụ na-ezi Spanish ma na-akọrọ ndị otu ịnụ ọkụ n'obi na anyị ọrụ.
N'ihi nkà na ụzụ ọhụrụ, Anyị nọgidere na-eleta ndị a afọ na Delia ka bi na Hanoi na Akananam kwụsịchaa ikere echiche na ọrụ. Anyị nwere nnọọ olileanya magburu ga-enwe ike iji rụọ ọrụ a website na-ahụ mmezu nke ihe mgbaru ọsọ na-edu anyị ike anyị NGO 2008.
Review nke Spanish isi obodo